ဖုန်တလုံးလုံး နဲ့ BM ကားကြီး စီးပြီး ကျောင်းတက် ခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘဝ အမှတ်တရ တွေကို ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ထက်အောင် – Cele Posts
ဖုန်တလုံးလုံး နဲ့ BM ကားကြီး စီးပြီး ကျောင်းတက် ခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘဝ အမှတ်တရ တွေကို ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ထက်အောင်
ကျော်ထက်အောင် ကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ အစီအစဉ်ကြေညာ သူအဖြစ် အနုပညာလောက ထဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင် ခန့်ညားတဲ့ အသံသြဇာရှိတဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် ပရိတ်သတ် အားပေးမှုကို တခဲနက်ရရှိထားသူပါ။ လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး များကို ရိုက်ကူးထားပြီး အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေး လက်ခံမှုကို ရရှိထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ပွဲတော် ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များမှာ ပါဝင်ခွင့်ရ ခဲ့တာကြောင့် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ကျော်ထက်အောင်ကတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ခွင့်မရခဲ့ပဲ အဝေးသင် တက္ကသိုလ်ပဲ တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့တာနဲ့ ပက်သက်ပြီးလည်း အခုလိုပဲ အမှတ်တရ တွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
” ကျွန်တော် နဲ့ နှစ်တစ်ရာ တက္ကသိုလ်…တကယ်တော့ တက္ကသိုလ်ကြီးထဲ တက်ချင်ခဲ့တာ ငယ်ငယ်လေးထဲက “နှင်းဆီဝိုင်” ဇာတ်ကားကြည့်ကတည်းက ငါသာ တက္ကသိုလ်တက်ရင် ဘာညာဆိုပြီးတွေးပျော်ခဲ့ဖူးတာ….. ကိုယ့်ခေတ်လည်း ရောက်ကော တောဂျိုအုံကြား ဖုန်တလုံးလုံး နဲ့ BM ကားကြီးပေါ် ခါးကုန်းစီးခဲ့ရပြီး
စိုးမြင့်ကြော်တို့ မြန်မာ တုန်ယမ်း တို့သောက်စားပြီး သင်္ချာ အဝေးသင် တက်ခဲ့ကြရတာ …. ဆရာမတွေ အသင်ပြကောင်း မှုနဲ့ ဘော်ဒါတွေ ရှိခဲ့လို့သာ…. ဘွဲ့ရသည်အထိ တက်ခဲ့ရပါတယ်…ဒါပေမယ့်လည်း …. အခုတော့ မတက်ခဲ့ရပေမယ့် နှစ်တစ်ရာ တိုင် ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးမှာပါဝင်ခွင့်ရ ခဲ့တာဆိုရင်ဖြင့် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာကြည်နူးရတယ်….. တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ ဦးသိန်းနိုင် တို့ မချိုတို့ အထူး ကျေးဇူးတင် ရပါတယ် …..” ဆိုကာ တက္ကသိုလ် အမှတ်တရ တွေကို ပြန်လည်ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်ရှင်။
ဖုနျတလုံးလုံး နဲ့ BM ကားကွီး စီးပွီး ကြောငျးတကျ ခဲ့ရတဲ့ တက်ကသိုလျ ကြောငျးသား ဘဝ အမှတျတရ တှကေို ပွောပွလာတဲ့ ကြျောထကျအောငျ
ကြျောထကျအောငျ ကတော့ မွနျမာအိုငျဒေါရဲ့ အစီအစဉျကွညော သူအဖွဈ အနုပညာလောက ထဲကို ရောကျရှိလာတဲ့ သူဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျ ခနျ့ညားတဲ့ အသံသွဇာရှိတဲ့သူ ဖွဈတာကွောငျ့ ပရိတျသတျ အားပေးမှုကို တခဲနကျရရှိထားသူပါ။ လကျရှိမှာလညျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး မြားကို ရိုကျကူးထားပွီး အဆိုတျော သရုပျဆောငျ အစီအစဉျ တငျဆကျသူအဖွဈ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အားပေး လကျခံမှုကို ရရှိထားပါတယျ။
ရနျကုနျတက်ကသိုလျရာပွညျ့ ပှဲတျော ဖြျောဖွရေေး အစီအစဉျမြားမှာ ပါဝငျခှငျ့ရ ခဲ့တာကွောငျ့ ဝမျးသာပီတိဖွဈရတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ ကြျောထကျအောငျကတော့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျမှာ ပညာသငျခှငျ့မရခဲ့ပဲ အဝေးသငျ တက်ကသိုလျပဲ တကျရောကျခှငျ့ ရခဲ့တာနဲ့ ပကျသကျပွီးလညျး အခုလိုပဲ အမှတျတရ တှကေို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
” ကြှနျတျော နဲ့ နှဈတဈရာ တက်ကသိုလျ…တကယျတော့ တက်ကသိုလျကွီးထဲ တကျခငျြခဲ့တာ ငယျငယျလေးထဲက “နှငျးဆီဝိုငျ” ဇာတျကားကွညျ့ကတညျးက ငါသာ တက်ကသိုလျတကျရငျ ဘာညာဆိုပွီးတှေးပြျောခဲ့ဖူးတာ….. ကိုယျ့ခတျေလညျး ရောကျကော တောဂြိုအုံကွား ဖုနျတလုံးလုံး နဲ့ BM ကားကွီးပျေါ ခါးကုနျးစီးခဲ့ရပွီး
စိုးမွငျ့ကွျောတို့ မွနျမာ တုနျယမျး တို့သောကျစားပွီး သခငြ်ျာ အဝေးသငျ တကျခဲ့ကွရတာ …. ဆရာမတှေ အသငျပွကောငျး မှုနဲ့ ဘျောဒါတှေ ရှိခဲ့လို့သာ…. ဘှဲ့ရသညျအထိ တကျခဲ့ရပါတယျ…ဒါပမေယျ့လညျး …. အခုတော့ မတကျခဲ့ရပမေယျ့ နှဈတဈရာ တိုငျ ခဲ့တဲ့ပှဲကွီးမှာပါဝငျခှငျ့ရ ခဲ့တာဆိုရငျဖွငျ့ အတိုငျးမသိ ဝမျးသာကွညျနူးရတယျ….. တာဝနျရှိသူတှေ နဲ့ ဦးသိနျးနိုငျ တို့ မခြိုတို့ အထူး ကြေးဇူးတငျ ရပါတယျ …..” ဆိုကာ တက်ကသိုလျ အမှတျတရ တှကေို ပွနျလညျပွောပွ ခဲ့ပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီး ကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျ ရှိပါတယျရှငျ။
လူတစ်ချို့ရဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက် မှုကြောင့် ကြိုးစားလို့ရခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ထွန်းထွန်း